Semalt: Ukukhusela abathumeli kwi-Gmail
Ngokuhamba kwexesha, njengoko usebenzisa i-Gmail kubhaliso kunye nokunxibelelana kwezentlalo ezifana neDropbox, Facebook, Twitter, kunye ne-LinkedIn, ibhokisi lakho lemilayezo engenayo linokukhukhumeza ngemilayezo engafunekiyo okanye i-imeyli yogaxekile. Amanyathelo alandelayo alungiselelwe nguAlexander Peresunko, Semalt Umphathi weNtuthuko yabaThengi, uya kukufundisa indlela yokukhusela abathumeli kwi-Gmail kwaye i-imeyile okanye imilayezo yabo isusiwe ngaphandle kokuxhatshazwa ngabo.
Vimba umthumeli kwi-Gmail:
Ukongeza i-imeyile okanye i-imeyile enokukrokra kwiluhlu lwe-Gmail yemilayezo evaliweyo, ungawahambisa kwakhona kwifolda yakho yogaxekile.
Vula umyalezo kumthumeli uzimisele ukuvimba;
Cofa kwiqhosha elongezelelweyo uze ubone it Triangle (▾) ecaleni kwenkinobho Yempendulo yakho kwicandelo lomyalezo;
Khetha iBlock "Igama" kwi menu yakho evele ibonakala;
Cofa kwiqhosha lokuVimba phantsi kweBloko le ndawo yeSondeza;
Kwabathumeli abathile, le menyu ingahle isebenze ngokufanelekileyo, ngoko ungayisebenzisa nje umgaqo woBhusela uMthengisi ukuyeka imilayezo yakhe ekufikeni kwebhokisi lakho lebhokisi le-Gmail..
Vimbela uMthumeli kwi-Gmail:
Ukuba uvakalelwa kukuba uye wavala umthumeli ngengozi kwaye wayefuna ukufumana i-imeyile yakhe kwixesha elizayo, unako ukususa i-ID yakhe kwiluhlu oluvaliweyo kwaye uya kuqala ukufumana imiyalezo. Kule meko, imilayezo okanye i-imeyili yalo mthumeli ayiyi kuhanjiswa kwifowuni yakho yogaxekile.
Vula indawo yomyalezo walo mthumeli kwaye nqakraza ngaphezulu ( ▼ ) iqhosha kwicandelo lintloko;
Isinyathelo esilandelayo kukuba ukhethe ukuVimbela igama elithi "Igama" kwimenyu evele ibonakala;
Cofa kwiqhosha le-Unlock, kwaye uya kuvula umthumeli ngokukhawuleza;
Ukuba unayo imilayezo evela kumthumeli ofanayo, kufuneka ulandele le nyathelo:
Cofa kwiKhetho lokukhetha (⚙) kwi-akhawunti yakho ye-Gmail;
Khetha Iqhosha leSetyuli kwimenyu ephezulu kwaye uye kwiCandelo lokuHlanya kunye neBlock Address
Kufuneka uqinisekise ukuba uhlolisise umthumeli ofuna ukumvimba okanye ukuvula;
Cofa kwiqhosha le-Unlock, kwaye uya kumvusa ngokukhawuleza;
Vimba uMthumeli usebenzisa umgaqo othile we-Gmail:
Unokubamba abathumeli usebenzisa ulawulo oluthile lwe-Gmail, oluchazwe ngezantsi:
Chofoza kwiqhosha lokubonisa ( ▼ ) kwi-akhawunti yakho ye-Gmail;
Thayipha kwi-ID ye-imeyli oyifunayo kwaye uya kuvula uluhlu olupheleleyo lwabathumeli okanye kwiimimandla kwaye uza kuqala ukufumana ii-imeyile ezizayo;
Kufuneka uklikha kwi-Yenza isihlungi kunye neqhosha lokukhangela uze uqinisekise ukuba usususile;
Kwi-Gmail, akufuneki ukususa imilayezo okanye ukuvimba abathumeli ngesandla. Ngezihlungi ezilula, i-akhawunti yakho ye-Gmail iya kuthumela onke ama-imeyile angenayo kubathumeli abacasulayo kwiFolda okanye iTrama ifolda. Njengenye indlela, singakwazi ukugcina umyalezo kwaye siyixhobise ngelebula, ukuze bangasiyeki ukwenza ezinye izinto. Sincoma ukuba ugcine ifolda yakho yogaxekile yokubika imiyalezo engenazo i-junk okanye i-malware kuba abahlaseli abahlukahlukeneyo baqhagamshelana nawe ngenzuzo yezemali kwaye baya kuqhubeka bethumela imiyalezo engento yintliziyo yonke imini Source .